Gurmadka ALAG ALAG अलग अलग | allsanaag
Gurmadka ALAG ALAG अलग अलग
Si Bulshada dhibaataysan loo badbaadiyo waa in Alag Alag loo howl galaa.
Gobolada Sanaag iyo Hayland, bulshaddii ku noolayd ee reer guuraaga ahayd maanta waxay la il daran yihiin abaartii ugu darnayd inta la xasuusan yahay ama sheeko lagu hayo ee ka dhacday gudaha Soomaaliya . Iyada oo ay taasi jirto, ayaa goboladani waxaan ka shaqayn maamul miisaaniyad leh oo bulshada wax tari kara . Ha’yadihii Caalamiga ahaa ee Soomaaliya ku sugnaa ayaa iyagana waxa laga dhaadhiciyey in goboladani yihiin dhul lagu muran san yahay oo Bahalo galeen ah. Siyaasiyiintii gobolka ka soo jeeday ayaa iyaguna waxay noqdeen calool u shaqaystayaal. IsimaddiI IYO Odayaashii ka soo jeeday goboladan ayaa iyaguna waxay noqdeen Siyaasiyiin ku kala biiray xisbiyada Ucud iyo Damuljadiid, Shaqana ka dhigtay doorashada soo socota xilliga ay dhacayso iyo lacagata ka soo gelaysa
Hadaba si Qurba joogta reer Maakhir ay u badbaadiyaan Bulshadan dhibaataysan ee dhabarka loo wada jeediyey waa in ay ku dhaqaaqaan arintan oo ah sida ugu dhakhsaha badan oo bulshadan gaajada iyo haraadka la il daran loo gaarsiin karo kaalmo deg deg ah.
“ALAG ALAG”. Alag Alag waa Erey Hindiya oo macnihiisu yahay gooni gooni.
Hadaan tusale u soo qaadano sida Alag alag u shaqayn karto waxaan tusaale u soo qaadnaynaa arintan.
Deeq Cabdiraxmaan, wuxuu ka soo jeedaa degaanada Maakhir, sanadkii hore wuxuu sameeyey arintan. Wuxuu ururiyey dhamaan qurba joogta ku nool caalamka oo ka soo jeeda magaaladiisa . Wuxuu ku xukumay in Qof walba uu bixiyo boqol doolar oo biyo dhaamis ah oo la gaarsiinayey reer guuraa u hayaamay Gobolada Sool iyo Bari. Sadex cisho gudahood wuxuu ku ururiyey Deeq lacag ah oo gaaraysay dhowr iyo tobon kun oo doolar . malintii Shaanaad Booyaddi u horaysay ayaa Biyaha gaarsiisay dadkii loogu talo galay ee ka hayaamay MAAKHIR ee joogay duleedka magaalada Adhicadeeyue ee gobolka Sool.
Ugu danbayntii maanta oo axada haddii arintan ALAG -ALAGTA ah la bilaabo, maalinta khamiista gobolada Sanaag iyo Hayland Iyo dadkii ka hayaamayba waxa la gaarsiinayaa deeq inkasta ha noqotee . Wan bIilow fiican iyo isku dayasho hor leh. Wixii hadda ka danbeeya hadii lagu fiirsadaa Bulshadan dhibaataysan, waxa la sugaa waa XABAAL WADAREED lagu ururiyo dadkii gaajada iyo haraadka u dhintay
← Six Trump proposals that must never become policy Buurta Barakaysan ee Calmadow →